Ukufaka i-recovey entsha kwi-Android | I-Androidsis
antocara | | Ukubuyiselwa kwe-Android, Izaziso, Tutorials
Sonke siyivile loo nto ukuba a tshintsha i-rom ukongeza kwi unayo ukufikelela kwengcambu Kuyimfuneko ukungena kwifayile ye- imo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo okanye cinezela ALT + s, okanye Sula okanye izinto ezifanayo, siya kuzama ukucacisa into nganye kwaye faka ukubuyiselwa kwakhona.
ukuba fumana ukufikelela kweengcambu kunye notshintsho lwamva igumbi kufuneka sisebenzise i Ukubuyisela. I Ukubuyisela sisicelo esisebenza ukuba nje sicinezela amaqhosha EKHAYA + AMANDLA ngaxeshanye kunye nefowuni icinyiwe kwaye ishiya ifowuni ikwimeko ngaphambi kokutshaja igumbi, ukuze siyitshintshe, siyigcine okanye siguqule iipropathi zekhadi le-Sd. Xa ifowuni ivela kumzi-mveliso, ngale ndlela ekuphela kwento esivumayo kukunxibelelana nekhompyuter kunye nenkqubo yekhonsoli kunye ne-SDK yokufikelela kwifowuni ukwenza iintshukumo. Ngomtsha ukuchacha Amathuba ezenzo ezenziweyo kwifowuni ngokwawo ayandiswa ngaphandle kokwenza ngokusebenzisa imiyalelo ye-linux kwikhonsoli. Singakwazi umzekelo kwaye kuxhomekeke ekubuyiseleni ukufakelwa, yenza i-backups, fomatha ikhadi le-sd, lungisa izahlulelo zekhadi, ubuyisele indawo yogcino egciniweyo, utshintshe indlela yokwandiswa kwamakhadi, njl. kwaye usebenzisa kuphela trackball yefowuni.
Los abuyeleys ukuyifaka ixhomekeke kuhlobo lwefowuni esinayo Umlingo weHtc okanye IHtc Iphupha okanye iG1. Umzekelo Umlingo weHtc Ngepleyiti engama-32B, oku kubuyiswa kugqityiwe kwaye iinketho ezikhoyo zezi uzibona kumfanekiso wokuqala. Ukwenzela i IHtc Iphupha okanye iG1 eyona isetyenzisiweyo kukufumana kwakhona Cyanogen okwangoku kuhlobo 1.4.
Ukuyifaka, into yokuqala ekufuneka uyenzile kukukhuphela ifayile ye Ukubuyisela ngokucacileyo. Yivule iziphu ukuba icinezelwe kwaye uyibeke kwifolda yezixhobo ze I-SDK ye-Android. Ezi fayile zinolwandiso lwe .img.
Nje ukuba unayo kwifolda ephawulweyo senza oku kulandelayo:
uqhagamshela ifowuni kwikhompyuter uqinisekisa ukuba unabaqhubi abafakiweyo
Ucima ifowuni kwaye uyayilayita imowudi yendlela ekhawulezayo, (ukwenzela i Umlingo ucofa umva isitshixo + samandla kunye g1 Isitshixo samandla + iqhosha lekhamera)
Uvula ikhonsoli nakwisixhobo sefolda ye-Android SDK uchwetheza oku kulandelayo:
i-fastboot boot filename.img (apho ibeka khona igama lefayile, nganye nganye ibhala igama lefayile ekhutshelweyo)
Ngale nto, ifowuni iqala kwakhona kunye nomfanekiso nge Ukubuyisela iyasebenza kunye nokukhetha inayo, iyasebenza kodwa ayifakwanga ngokusisigxina. Ukuba siyayicima ifowuni kwaye siyibuyisele kwakhona imo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo Siza kubona ukuba sibuyile kule yangaphambili Ukubuyisela ebesinayo.
Ukuyifaka ngokusisigxina kwifowuni kufuneka senze oku kulandelayo:
Ngefowuni eqhagamshelwe kwikhompyuter kunye nekhadi elinyusiweyo, ukopa ifayile yokubuyisela kwikhadi lakho le-sd kwaye ulinike igama elitsha njenge ukubuyisela.img.
Kwikhonsoli nakwizixhobo zolawulo lwe-Android sdk oyichwethezayo
I-adb iqokobhe le-flash_image ukubuyisela / isdcard/recovery.img
Ukugqiba kwam ukuyifaka siyachwetheza
I-adb iqokobhe lokuqalisa kwakhona
Isiphelo siya kuqala kwakhona kwaye isikrini kunye neenketho zefowuni ziya kuvela. Rhoqo xa singena imo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo Esi sikrini siza kuvela nazo zonke iindlela ezikhoyo.
UMTHOMBO | forum.xda-developers.com
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ukubuyiselwa kwe-Android » UKUFAKWA KWENKCUKACHA ENTSHA KWI-ANDROID
Ndinephupha kwaye ndinokubuyiselwa komfanekiso, ngaphandle kwamathandabuzo eyona nto ilungileyo yokutshintsha i-rom. Uyikhuphele kwi-SD nge-opera ngokusebenzisa i-terminal ngokwayo, emva koko uqale ukubuyela kwimeko yesiqhelo kwaye ukusuka apho ukhuphele kumda kwaye uhlaziye. Ngamanye amagama, ngohlaziyo oluhlaziyiweyo uguqula ii-Androids zakho zibe ziziphelo ezizimeleyo ngokupheleleyo.
Xa ndizama ukwenza ./adb iyandixelela:
Impazamo ayifumanekanga. Kwaye andinakukwazi ukufaka kwakhona ...
Sithandwa, into enje ibilahlekile, nangona bendisele ndiyilungisile ngokufunda apho kwaye NDIMANE NDIKUKHOKA UKUTHETHA UQALE UMNXEBA KWIMODYU YEMODO jojojo kodwa ekugqibeleni yimbali ... ndiyathandabuza ukuba.
Ndenze i-backup nge-cyanogem yam yokufumana kwakhona, kodwa ndalayisha enye i-rom ukuzama kwaye andiyithandi, ndiyibuyisele kwisipele kodwa khange isebenze kum, yaxhoma emva kwesimboli se-htc nescreen Umnyama, awuzange ubengcono ke kuye kwafuneka ndiyifake kwakhona iROM epheleleyo, ndilahlekelwe zizo zonke izibonelelo… kungenzeka ntoni?
Ngaba ndingafomatha nje ext3 okanye ext2 ukusuka apho? Ukuba nditshintsha ukusuka kwi-ext2 ndaya kwi-etx3 i-fat32 ichaphazelekayo?
I-PS JACxHeroSki 1.8 lukhetho lwakho ukuba ufuna ulwelo kunye neqhawe kwimizobo!
Molo Alvaro. Ukuba ufomatha okanye utshintshe ulwandiso ukusuka kwi-Ext2 ukuya kwi-ext3, ulwahlulo lweFat32 aluchaphazelekanga konke konke. Unayo i-1.8 kwaye ilungile? Yeyiphi isiphelo sakho, umlingo okanye i-g1?
Ndine-g1 ndisandul 'ukuyikhuphela i-jacheroski1.8, i-1.6 ihamba kakuhle ... kuphela "ukuqala kwakhona" kwesikrini sasekhaya xa ubuya kwisicelo esinzima, njengegalari, okanye isikhangeli esineefestile ezininzi, ezo zinto .. .
Oko kukuthi, ukuba ndiqaphele kwiforum yabaphuhlisi be-xda ukuba bathetha nge "compcache" kunye "swapiness" kunye nezinye izinto ngokunjalo, kodwa ndashiyeka ndinamathandabuzo okuba kufuneka i-64 MB yokutshintsha, ngaba andikuqondanga okanye ndilungile? Ngaba ungaphinde ujonge kwaye ucacise xa unexesha. Ifakiwe kwimixholo ye- «Akirah» nakwabavelisi be «JACHEROSkiv» ,,, nceda
O kwaye yintoni iBFS? Ezona nkqubo zibalaseleyo? = P
I-PS: ukubuyisela kwakhona okuvumela ukufomatha kunye nokutshintsha inkqubo yefayile yiAmonRa leyo ikumfanekiso we-cyanogen ayiyivumeli, andiyilawuli kwi-linux, kodwa ndinokufomatha ngesandla kwi-cone yokubuyisela, (alt + x kwimeko ye-cyanogen), kwaye ithini imiyalelo? Andibazanga, enkosi.
Ndiyathemba ukuba uthatha ixesha ukuphendula zonke iinkxalabo zam ^ _ ^
Ndivile kwaye ndiqala ngesandla ukuba yintoni, compache, swapp, bsf. Enye indlela yokufomatha kwifowuni ngokwayo kunye nenye kwimiyalelo ye-linux (le ibisele iyenza). Umsebenzi omninzi, huh? :)
Ewe ndineg1, ndiyifakile inguqulelo engu-1.7, ndiyikhuphele nje i-1.8, kodwa ihamba kakuhle, ihlala njengokulayisha iphepha lasekhaya, xa uvela kwisicelo esidinga izixhobo ezininzi njengesikhangeli esineefestile ezininzi okanye igalari, enxulumene
Ngoku ndine-1.8 yokufaka kodwa ndinamathandabuzo okuba ungandisombulula.
Ukubuyiselwa endinako kuvela kuCyanogem njengoninzi lwe-G1, kodwa ayindivumeli ukuba ndenze ifomathi ngokuthe ngqo isahlulelo se-ext2 ext3, ke bendizibuza ukuba ndingayenza na ikhonsoli ezisa oku kubuyiselwa kunye nemiyalelo ehambelana nayo, kodwa mna ndizikhangele (ii-linux) kwaye andizifumani, ungandinceda?
Enye into ebuyayo kukuba ndenze isipele ngale nto yokubuyisa i-rom endinayo iJacheroski 1.7, kodwa ndifuna ukuyibuyisela kuba ndizamile abanye phaya, (kuba kukwahluka kukhetho) ayisebenzi kum, yahlala incamathele emva kwelogo ye-HTC kwiscreen esimnyama kuvulwe iiyure eziliwaka kwaye akukho nto iqhubekileyo ... kukho into engazulunga ?? .. Ndifuna isikhokelo malunga noku .. kuba kuthetha umsebenzi omkhulu ukutshintsha i-rom .. susa kwaye ifomathie ikhadi kwikhompyuter kunye nayo yonke loo nto kuba ukubuyela kwakhona konwabe akusebenzi kum ...
Ngaba ndingavavanya nge-ammonRa eyiyo ebonakalayo emfanekisweni ekuqaleni?
Enye into kukuba iyavela kwiforum yabaphuhlisi beXDA,… kwisithuba sika-Akirah (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=555624) (eyenza uhlengahlengiso kwiJacHeroSkiXXX rom ngoku kulandelayo:
Yintoni lento?? isahlulelo esikhulu sokutshintsha? Unganditolika ... kuba ndimkhulu kakhulu ... Ndidinga ukwenza ulungiso kwisahlulelo sekhadi lam okanye yenye into?
kwaye enye into yi "Kernel w / BFS" .. kuba yapapashwa kwiposti yabaphuhlisi bejacHeroSki (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=534479),
I-BFS = eyona nkqubo-sikhokelo ilungileyo? Andazi..
UKUPHILA NGOKUPHELELEYO SOFTWARE SIMAHLA !!!!
Ungandixelela ukuba yeyiphi imiyalelo emayilandelwe ukuze ukwazi ukuyenza ngeMac?
Ndingumtshintshi weMac (newbie) kwaye andazi ukuba yeyiphi imiyalelo yokusebenzisa ukuyenza kwikhonsoli
Ndiyayiqonda k ukuyenza kwiMac, kuya kufuneka ubeke ./adb,no?
Iindaba ezimnandi… IJackHeroSkiv 2.1 iyamangalisa !!!! Inoboya, inamanzi, inobuhlobo kwaye iyakhawuleza ...
Kuya kufuneka wandise ukwahlulahlula kweLinuxSwap ukuya kuma-64MB yile nto bacebisayo ababhali ...
oh kwaye ugcine engqondweni umthetho wegolide ... UNGAZE UVULE IBHODI EKHAYA, okanye uye EKHAYA ngebhodibhodi evulekileyo ... kuphela kwetyala endilifumeneyo ....
Ndisafunda ukuphucula inkqubo kunye nokutyibilika kuloo ngxaki yokutshintsha kunye nolunye useto kwifayile yomsebenzisi
IMPILO NOKUTSHINTSHA! ILUNGE KAKHULU!
MHLOBO WAKI AKI KWAKHONA ...
Uyazi emva kovavanyo oluninzi ndize kucebisa i-rom ezokushiya wothukile sisantya .. ziiRevolutions zeHEro kwiXDA-Abaphuhlisi .. iyamangalisa indlela ekhawulezayo kunye nokukhawuleza .. ukuba awundikholelwa zama =)
UAH Anto…. Kwi-ebay ndiye ndafumana izixhobo ezizezinye zeHTC yam eqhekeze ukhula lwenkohlakalo 😉
Uyabona .. =)
Mholo. Ndiyavuya uyifumene. Ndiza kuzama loo rom ukuba uphawule. Konke okugqibelele
Andithandabuzi. Emva kokwenza konke oku, xa ndiqala ifowuni ngeqhosha BACK + POWER ngaxeshanye, ingaba itshaja entsha kufuneka ivele okanye itshaja yee-androids iyaqhubeka ukuvela ngelixa iskateboarding?
Ilanga lishushu sitsho
Ndenza yonke into njengoko isitsho kwisifundo, ndilandela onke amanyathelo, ndiyeka xa ndibeka "i-adb shell reboot", ayiyibuyisi kwakhona ifowuni kwaye ke ngoko ukufakela ukubuyisela akukwenziwa ngokupheleleyo, mhlawumbi, nceda ndincede
Phendula kwiTory Sunny
Ngokwenza ngesandla, ndicinga ukuba uthetha ukucima iselfowuni njengoko kuqhele ukwenziwa, kodwa sele ndiyenzile kwaye ukubuyiselwa kwakhona akufakwanga
zama ukuqala kwakhona kwe-adb, endaweni yokuqalisa kwakhona kwe-adb shell
Inyaniso ayisasebenzi, andazi ukuba ndithini kwakhona
Ndine-thc g1 kodwa xa isiboniso se-android sigqiba iscreen sihlala simnyama, inokuba yintoni kwaye ndingayisombulula njani?
Igama loqhagamshelwano Dorian sitsho
Ndiyabulela kakhulu ukuba yandikhonza kakuhle !!!
* Ngefowuni eqhagamshelwe kwikhompyuter kunye nekhadi elinyusiweyo, ukopa ifayile yokubuyisela kwikhadi lakho le-sd kwaye uyinike igama elitsha njenge- recovery.img.
* Kwikhonsoli nakwisixhobo sefolda ye-Android sdk oyichwethezayo
Le misebenzi yenziwa ngefowuni eqhagamshelwe kwi-pc kwimowudi ye-fastboot? ... Ukuba yile ndlela i-sd inyuswe ngayo kwaye iifayile zikhutshelwa kwi-console ..
Into yokugqibela iWindows7 ayiyiboni ifowuni yam… ndibathathaphi abaqhubi bale nkqubo…. Ifowuni yam liphupha le-HTC, DREA100 PVT 32B; I-HBOOT-0.95.0000; I-CPLD-4; Irediyo _2.22.19.26I
UMauricio Herrera sitsho
Ndinengxaki, iifestile ezisixhenxe sele ziqonda ukuba ndinabaqhubi be-android, kodwa xa ndiyicima kwaye ndikwimo ye-fastboot akukho ndlela yokuba kubekho unxibelelwano phakathi kwefowuni kunye nekhompyuter nge-USB, yenza nje ukuba kwi kwelinye icala akukho kuqhubeka, nangona kukho amandla kuba ndikhupha ibhetri kwaye ifowuni iyaqhubeka nokusebenza.
* uqhagamshela ifowuni kwikhompyuter uqinisekisa ukuba unabaqhubi abafakiweyo.
* Ucima ifowuni kwaye uyilayite kwimowudi ye-fastboot, (ngokwenza umlingo ngokucinezela isitshixo sangasemva + kunye neqhosha lamandla le-g1 + kunye nekhamera
Kulungile (kodwa akukho nto yenzekayo)
* Vula ikhonsoli nakwizixhobo zolawulo lwe-Android SDK chwetheza oku kulandelayo:
Ke ndivula ikhonsoli (i-CMD) kwaye ndiye ku-D: \_ android-sdk-windows \_ tools> kwaye ndibhale
Ukubuyisela ngokukhawuleza kwi-boot cm-recovery-1.4.img
Ngaba kukho umntu owaziyo into endiyenzayo engalunganga?
Phendula uMauricio Herrera
ndilinde isixhobo, ndithetha ukulinda isixhobo se-XD nge-sdk wenze konke ngokuchanekileyo, kodwa kuya kufuneka uqale kwimowudi ye-fastboot ngokulinda isixhobo kwiscreen nje ukuba uqale imowudi ye-fastbboot kwaye ukuba umqhubi uchanekile uyakusebenza , Andazi ukuba iqala njani kwi-fastbooto ngeselula yakho kodwa gcina engqondweni ukuba yonke ifowuni ephathekayo iyenza ngendlela yayo
Ngubani igama lefayile yekhonsoli… ???
kuthekani ukuba ndine-lg eve gw620? Kukuphi ukubuyiswa okuphantsi?
Isabonakala njenge bummer kuba kwi mac isiphelo esingamkeliyo izinto ezifanayo kwaye andazi nokuba ndingafikelela njani kwifolda ye-SDK
Ndidikiwe kukuzama kwi-htc yam, ihlala ilinde isixhobo, ndafaka uhlaziyo lwe-4 ye-sdk kuba ukuba ndiyayifaka inguqulelo yangoku, impazamo iyavela kwaye ayivumeli nomntu ukuba ancede ukuqala ngokukhawuleza ..., ubuncinci ukuba balayishe isifundo bayigqibe
Ndinombono we-gtablet sonico android 2.2, ndibeka umphathi wegumbi kwaye ndikhethe kwimowudi yokubuyisela kwimeko yesiqhelo, kodwa iwotshi endiyifakileyo ayilayishi iyaphuma ilayishe kwaye iphinde ibe bhetele ngakumbi ayizukungena, kwaye ngoku lonke ixesha ndivula ithebhulethi kuphela ingena ikhangela imo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo kwaye andinakwenza nto T_T
UJosmell Jimenez sitsho
Molo, NDINENGXAKI ENKULU KAKHULU kwaye kukuba andinakukwazi ukuyiguqula UKUPHILA KWAM NAYIPHI INDLELA. Ndizamile ukutshintsha yonke into kwaye akukho nto yenzekayo.
Xa ndenza amanyathelo okufaka ukubuyisela kwakhona, ihlala ikwi-VODAFONE screen, kwaye ukusuka apho ayenzeki, kwaye ndenze iinzame ezininzi KODWA AKUKHO NTO, andazi ukuba kwenzeka ntoni: S
Ndilinde impendulo !!!!!!!!!!!!
Phendula kuJosmell Jimenez
Ndiqalile ukwenza kwakhona kwi-bq kepler tablet yam kodwa ayiphenduli, iyabambeka. Ndingaqala njani kwakhona?